Shiinaha 24kV 200A Bushing Insert warshad iyo soosaarayaasha | Anhuang
Anhuang oo ku takhasusay Ku duugista gelinta, waxaan bixinnaa tayo sare oo lagu shubo. Alaabtayadu waxay waafaqsan yihiin IEEE386, iyo heerarka IEC.
24kV 200A Bushing dunta geliya dun guud duugista si ay u siiso shaqo la mid ah duurjoogta jabista xamuulka ah ee muhiimka ah. Adeegsiga waxyaabaha lagu rakibo duurka waxay ka dhigeysaa rakibidda duurka iyo beddelkiisa mid suurtogal ah oo waxtar leh. Waxyaabaha lagu shubo iyo suxulka isku xirayaasha waxay ka kooban yihiin qaybaha lagama maarmaanka u ah dhammaan iskuxirka biririfta xamuulka. Gelinta duurka waxay isticmaashaa waddo gabi ahaanba la ilaaliyo, oo ay ku jirto hal dhibic oo keliya oo wareejinta hadda ah, gudaha lafteeda lafteeda. Dabeecadda aan dhib badnayn ee naqshadeynta dariiqa hadda jirta ayaa keenta waxqabad ka sarreeya oo lagu kalsoonaan karo.
Burbur gudaha ah ayaa u oggolaanaya rakibaadda xakamaynta saxda ah. Iyada oo la adeegsanayo qalabka xaddiga ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah, gelinta duurka si habboon ayaa loogu adkeyn karaa si wanaagsan duurka iyada oo aan laga baqin in si shil ah loo jebiyo buundada ceelka. Aaladda giraanta tilmaame xoog leh, oo ku taal xagasha goobaabka ee qoorta duugga, waxay baabi'ineysaa mala-awaalka rakibaadda xusulka jebinta ee gelinta duurka.
Giraanta jaalaha ah ee dhalaalaysa waxay bixisaa jawaab celin degdeg ah si loo ogaado haddii xusulka si habboon loogu rakibay galka.
Isku-xidhka isku-xidhka Hal-ku-dheggu waa la mideeyey iyadoo la isticmaalayo daboolid daaweyn baaruud leh oo tayo sare leh iyo caag EPDM semi-conduction ah. Markaad la jaanqaadayso qayb isbarbar dhig ah, guntinta duudduubku waxay siisaa xidhiidh dhammaystiran oo gaashaaman oo dhex-dhexaad u ah hawlgalka jabinta culeyska.
1.INSULATION: Tayo sare, roba caag ah EPDM oo la daweeyay oo qaabaysan, isku qasan oo qaabeeysan gudaha si waxqabad joogta ah oo leysku halleyn karo.
2.LATCH INDICATOR RING: Giraan isku mid ah oo dhalaalaya oo dhalaalaya ayaa meesha ka saaraya suxulka rakibaadda xusulka adoo hubinaya xiriir tayo leh.
GARABKA SHAQAALAHA SEMI-CONDUCTIVE: Caag EPDM oo tayo sare leh ayaa siiya gaashaan hore oo dhinta kaas oo hubiya in ay dhulka dhigteen.
4. HAYSASHADA HAYSTA: Qaybta naxaasta ahi waxay hadda ka soo wareejineysaa bistoolad-taabasho waxayna u wareejineysaa buundada ceelka.
5. SALDHIGA LA QAADAY: 3/8 ”-16 UNC Mawduucyada Copper waxay bixiyaan xiriir la leh duubista ceelka.
6. HEX BURBUR: 5/16 ”hex broach wuxuu oggol yahay rakibo isdaba joog ah oo leh qalab xaddidan.
INDHAHA LAGU QAADO: Saddex tab oo loo sameeyay qaab gaashaan-dabiici ah oo loogu talagalay ku-xirnaanta siligga dhulka si loo ilaaliyo nabadgelyada hore ee dhimatay.
8. ARC SNUFFER GOLAHA: Balaastiigga qallalan ee arc wuxuu soo saaraa gaaska bakhtiiye gaas inta lagu jiro hawlgallada beddelka culeyska.
9. GELI GAAR AH EE SHAQO-SAMI AH: Cinjirka EPDM oo tayo sare leh wuxuu bixiyaa xoog farsamo iyo gaashaan isku mid ah oo koronto.
200A 24kV Geli Bushing AH DTT-24/200 24kV 200A
Hore: 15kV 200A Wareeg Feedthru Gal
Xiga: 15kV 200A Gali Bushing